Odinga oo gudiga doorashada ugu baaqay ineey joojiyaan tirinta codadka
Home Somali News East Africa Odinga oo gudiga doorashada ugu baaqay ineey joojiyaan tirinta codadka
Ra’ila Odinga, oo ah murashaxa loolanka adag kulajira uhuru Kenyata, aya sheegay ineey jiraan codad lays daba mariyay.
“Waxaa jiro codad lays daba mariyay, waxaan aynaa cadeeymo muujinaya arintaas” ayuu Odinga yiri.
Ra’ila Odinga, ayaa gudiga doorashada ee hada ku gudo jira tirinta codadka ugu baaqay ineey joojiyaan, laakiin madaxa gudiga doorashada ayaa kasoo horjeestay hadalka kasoo yeeray Ra’ila Odinga.
“Majirto wax codad ah oo lays daba mariyay, wax walbo si caadi ah ayay usocdaan, gudiga doorashada waa mid ka madax banaan labada dhinac” sidaa waxaa yiri Ahmed Issack Hassan, oo ah madaxa gudiga doorashada Kenya.
Waxaa jirto codad aad u farabadan oo halaabay, iyadoo ay xusid mudantahay in qalabkii Elektarooniga ee loogu talagalay in codadka lagu tiriyo ay cilad ku timid, taasoo keentay in gacmaha lagu tiriyo codadka.
Dad kabadan 1,000 qof ayaa dhintay, intii u dhaxeeysay 2007-2008, markaasoo Odinga uu sheegay in isaga uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada halka Mwai kibaki uu isna sheegtay inuu yahay ninka guuleystay, taasoo sababtay rabshado aad u daran.
Kibaki, ayaa hada xafiiska isaga tagaya, kadib markii laba mar loo doortay inuu hogaamiyo dalka Kenya.
Natiijadii ugu danbeeysay, ayaa sheegaysa in Uhuru kenyata uu (55%) ku hogaaminayo, halka Ra’ila uu ilaa iyo hada haysto (40%).